Ku xir Microstation V8i adeegyada WMS - Geofumadas
Abriil, 2009 Geospatial - GIS, GvSIG, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Muddo ka hor waan soo bandhignaa habka macquulka ah sida ay suurtogal u tahay in lagu xiro adeegyada OGC ee Microstation, waxaan xusuustaa in Keith ii sheegey in qaybta xigta ay lahaan doonto awoodahan.
Si loo helo, had iyo jeer waxaa lagu sameeyaa maareeyaha raajada oo hadda, marka lagu daro ku darista feylka iyo adeegga muuqaalka, xulashada adeegga khariiddada websaydhka (WMS) ayaa muuqata. Tan looma baahna Khariidadda Bentley, horeyba waa loogu daray Microstation, haa, waa inay noqotaa V8i ama sida loogu yeedho v8.11.
Waqtiga ugu dambeeya Waan sharaxay sida adeegyadu u shaqeeyeen sidaas hadda waxaan arki karnaa oo keliya sida loo fuusho xabadaha.
Marka xulashada ikhtiyaariga ah, guddi ayaa u muuqda meesha url ee adeega loo doorto, sidaas darteed adeeg kasta oo xogta la daabacay oo leh shuruudaha OGC ee wms-ga ayaa la tashan karaa.
Xaaladdan, fiiri in xitaa suurtagal tahay in la isku xiro adeegyada waxaa daabacay Manifold GIS oo la adeegsanayo wms, taas oo kiiskan loo heli karo iyada oo loo marayo localhost.
Marka adeegga la doorto, nidaamku wuxuu la tashanayaa lakabyada la doonayo, amarka, qaabka iyo ikhtiyaarrada mugdiga ah. Dhinaca midig waxaa ku yaal guddi guud oo dejineed, oo ay ku jiraan saadaasha ay lakabku ku jiro, qaabka sawirka, hufnaan, kala duwanaansho, iyo kuwo kale. sidoo kale waxaa jira tab si aad u eegto, taas oo ah mid aad u macquul ah.
markaa feylka waa la badbaadin karaa shilalka sii kordhaya kadibna waxaa loo yeeri karaa.
Wakhti yar dabayaaqadiisii, laakiin ugu dambeyntii waxay timid Microstation, tani waxay la mid tahay ka hor inta aan arkayno in la sameeyey kala cayncayn ah, GvSIG, Google Earth.
Post Previous" Hore Qalinka Sawirada, ku xafid shaashadda internetka
Post Next Bentley Map waxay rabtaa inaad u guurto V8iNext »